Ingqalasizinda | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | March 2020
Indlela yokukhetha isiteshi sokumameta ukunikeza
Ukuze kusetshenziswe izitshalo endaweni yangasese, amanzi avela emithonjeni eseduze, amakholomu, nezindawo zemvelo ezivame ukusetshenziselwa, uma efakwe ipompo eliphansi uma kudingeka. Kodwa uma i-cottage ingaxhunyiwe ohlelweni lwamanzi oluphakathi, kuyadingeka ukuxazulula inkinga yokunikezwa kwamanzi endaweni. Khona-ke abanikazi kudingeka bahlole umbuzo wokuthi bangakhetha kanjani isitimela sokumatshela indlu yangasese.
Indlela yokwenza ucingo ngemibhede ngezandla zabo
Njengoba nginakho ngisho nendawo encane yomhlaba, ngifuna ukutshala okuthile kuyo ukuthi izothela izithelo noma nje ujabule iso. Kodwa ngokuvamile abalimi nabalimi abacabangi kakhulu ngokuklama kwemibhede. Yingakho izingcingo zemibhede zenziwe ngezinto ezingafanele futhi zibukeke zingenakuzithoba.
Konke mayelana nomgudu wokujikeleza we trekta
Amatrakta, ama-mini-tractors kanye nama-tillers asiza ukwenza ukuphila kube lula kubo bonke abalimi: kusukela ezifini ezincane kuya ezindaweni ezinamandla zokulima. Inzuzo enkulu ye trekta yindlela yokusebenzisa imishini elandelwe futhi ehlanganisiwe yemisebenzi ehlukene. Isibonelo, ukugaya noma ukulungisa insimu yokuhlwanyela sebenzisa izinhlobo ezahlukene zamandla.
Ukucelwa kwepulasitiki ehlobisa imibhede yakho (enezithombe)
Ngisho noma ubeka umyalelo omuhle kusayithi lakho, ungakwazi njalo ukuthuthukisa nokwengeza okuthile. Phela, izakhi zokuhlobisa azifanelekile kuphela ezakhiweni, kodwa futhi ensimini. Kungenzeka ukuhlobisa ama-flowerbeds, imibhede kanye nesikhala ezungeze izihlahla, isibonelo, ngosizo lwezingcingo. Imibhede yepulasitiki ehlukahlukene ihambisana ngokuvumelana nendawo yangaphakathi yesayithi lakho futhi isiza ukuhlela izitshalo, ukuqinisekisa ukukhula kwazo okuhle ngisho nobusika.
Okudingayo ukucabangela ukwakha i-enclosure yenja
Ngaphambilini, izinja ezazihlala egcekeni, zakha amadokodo futhi zibopha ngeketheni. Namuhla, ngokuphindaphindiwe esebenzisa ukwakhiwa kwezindawo ezivulekile. Ngakolunye uhlangothi, inja ayinakho ukufinyelela emzimbeni wesimenywa ongena egcekeni, ngakolunye uhlangothi, i-collar ayidonki entanyeni ngaso sonke isikhathi, futhi umlindi othembekile angadlulela indlu yakhe ekuphakameni kwakhe okugcwele.
Gcina imikhiqizo eplasini yeplastiki
Izakhamuzi zasehlobo, ezikhetha ukutshala imifino yesikhathi esizayo futhi zenze ukulondolozwa, zihlale zibhekana nenkinga yokugcina isikhathi eside kwezinhlinzeko. Ngaphandle kwe-cellar lapha akwanele. Kodwa-ke, akuwona wonke umuntu okwazi ukuzakhela isikhathi nesikwazi, futhi kudingeka usebenzise usizo lwabachwepheshe. Muva nje, izitsha zepulasitiki ezenziwe ngomumo ze-cottage ehlobo ziyakuthandwa kakhulu.
Hlanganisa i-cottage ehlobo wena
Ngokuvamile, abanikazi bomhlaba abasha babhekene nenkinga yesakhiwo esingalingani: izibhamu, imigodi, imigodi, njalonjalo. Abantu abaningi bacabanga ukuthi kuzothatha umzamo omkhulu nokutshalwa kwezimali ukuze kulungiswe isimo. Kulesi sihloko sizobona ukuthi singalinganisa kanjani isakhiwo kuleli zwe ngezandla zabo ngaphansi kwegundane noma ngaphansi kwensimu, ukuthi kunzima kangakanani noma kulula ukukwenza.
Ukunakekela nokukhethwa kwezitshalo zasemanzini
Endlini yangasese noma ezweni, abaningi bakhe izakhiwo zokufakelwa. Yiqiniso, kulokhu awukwazi ukwenza ngaphandle kwamasiko azoba umhlobiso omuhle wesakhiwo. Kulesi sihloko sizochaza ukuthi yiziphi izitshalo zasemanzini ezifanele kakhulu ngamachibi nezinye izidumbu zamanzi, indlela yokutshala nokuzinakekela. Indima yezitshalo echibini Ngokungangabazeki, amasiko akhula echibini enza kube kuhle kakhulu, kwasekuqaleni futhi kuphila.
Imibhede efudumele ngezandla zabo
Esinye sezici ezithonya ukuqala kokuhlwanyela, kanye nokukhula nokuthuthukiswa kwezitshalo ezitshaliwe, ukushisa komhlabathi ovulekile. Ngenkathi eyodwa, izitshalo ezintathu noma ezine ezinezinga eliphezulu zezitshalo ezihlukahlukene ezivela endaweni eyodwa zingatholakala ngemibhede efudumele, engakwazi ukuxazululwa kalula ngezandla zakho.
Indlela yokwenza ucingo ku-cottage
Ucingo lwe-Wicker lwamapulangwe lungumqondo omuhle ezindlini zezwe noma e-cottage ehlobo. Lo ukwakhiwa kunikeza ubuqiniso endlini. Ake sibheke indlela yokulungisa izinto zokwakha izindonga kanye nendlela yokuyiqoqa. Ephansi, ephakathi noma ephezulu? Njengomthetho, izicabha ze-wicker zihlukaniswe zibe izinhlobo eziningana kuye ngezinhloso.
Indlela yokwenza umoya wokuphuza umoya emiphongolweni
Ngokuvamile, sibhekene nendaba yokugcinwa kwemifino neminye imikhiqizo ebusika. Indawo ekahle yi-cellar, noma kunjalo, ukuze imikhiqizo ibe khona isikhathi eside, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi umoya ophuthumayo usebenza kahle. Kulesi sihloko sizobe sitshele indlela yokwenza igumbi elingaphandle. Isebenza kanjani?
Abanakekeli abahambayo nabaselula bezolimo ezifuywayo
Njalo ngonyaka inani lemishini elisetshenziswa abalimi emisebenzini yabo yebhizinisi liyanda. Ukuzenzekelayo kanye nokusebenza kwemisebenzi emapulazini kusiza abasebenzi, kwenza izimo zezilwane zibe ngcono futhi ekugcineni kuncishiswe izindleko zemikhiqizo elandelayo. Lawa madivayisi afaka phakathi abahlinzeki bokudla.
Hlanganisa "i-Niva" SC-5: ukubuyekezwa, izici, izinzuzo kanye nokuqapha
Imiklamo ephumelela kunazo zonke yezimoto ngokuhamba kwesikhathi igcwele amangakwane futhi ibe uhlobo lwezimpawu ze-epoch. Noma kunjalo, eziningi zazo zisebenza ngokuphumelelayo futhi zisakhula. Enye yalezi "eside-liver" esiyicabangayo ekubuyekezweni. Sifunda ukuthi yini ephawulekayo mayelana nedivaysi yenkambinkimbi ehlanganisa "Niva SK-5".
Izimiso zendalo zemvelo
Ukubukeka kwemifino eminingi yemifino ayishintshi phakathi neminyaka - isitshalo ngasinye sinendawo yaso, esivela kuso. Ubuchwepheshe obunjalo bezolimo buletha izithelo eziqinile, kodwa akucabangi ukuthi ukubunjwa kwenhlabathi kungashintsha, futhi izitshalo kufanele zishintshwe, zibeke "emaceleni" afanelekile.
Indlela yokwenza ucingo lwe-gabions lwenze ngokwakho
Kuze kube manje, kunezinto eziningi ezihlukene ezingasetshenziswa ekwakhiweni kwezakhiwo ezihlukahlukene njengezicingo. Uma ukhetha okukodwa noma omunye umklamo, ngokuvamile uqondiswa yiqiniso lokuthi wawunamandla okwanele futhi wakhonza iminyaka engaphezu konyaka. Isici esibalulekile ngokulinganayo nokuvelela nokubukeka kocingo okwakhiwe.
Indlela yokwenza i-extruder eyenziwe ngokwenza ngezandla zakho
Eziningi ziqukethe imfuyo ekhangayo yezilwane epulazini labo. Ezimweni ezinjalo, kunenkinga enzima yokusetshenziselwa ukondla - izifiso ze "amawadi" zikhulu kakhulu, futhi ukudla kulungiswa kaningi. Ukuze wenze lokhu, udinga futhi imishini, futhi imiklamo yezimboni ibiza kakhulu. Kodwa isisombululo sisesekhona - ukuqoqa isilwane se-extruder ngezandla zakho.
Indlela yokwenza umbhede wasezingeni elifudumele endaweni yokushisa: ukuhlola izindlela
Isimo sezulu lesifunda sethu siwukuthi kude kakhulu nendawo zonke zikwazi ukufudumala ngesikhathi sokutshala izithombo endaweni evulekile. I-greenhouse iyasiza abalimi, kodwa kunezidingo ezithile zokushisa ngisho nangomhlaba wokushisa. Ukuze kuqhutshwe inqubo yokufudumala emhlabathini endaweni yokushisa ye-polycarbonate futhi ukuvikela izithombo ekushintsheni okushisa okwedlulele, kufanelekile ukuhlomisa imibhede efudumele kusukela ekwindla.
Indlela yokwenza i-grill ngezandla zakho
Kunzima ukuzicabangela ukuthi ngubani ongakaze ahambele i-kebab okungenani izikhathi ezimbalwa phakathi nenkathi. Ngokuvamile, izimali zemvelo ziyinkimbinkimbi ngokungabi khona kwemfanelo eyinhloko - i-brazier, eyenza ukuhlukunyezwa okunjalo kaningi kangako. Ekugcineni, unquma ukwenza i-grill ngezandla zakho kusayithi lakho, kodwa awukwazi ukuthi ubani ozokhetha nokuthi uzoqala kuphi.
I-Kruporushka (rushka) yommbila yenza ngokwakho
Ummbila ubaluleke kakhulu njengenye yezinto ezibalulekile zokudla kubantu nezilwane, ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwezakhi. Uma ukhula njengokudla, kubalulekile ukuhlukanisa okusanhlamvu kusuka ku-cobs. Le nqubo ingcono kakhulu. Ngakho-ke, ukwenza kube lula, ungenza i-husk ekhethekile yembewu ngezandla zakho.
Igumbi lezimvu: kanjani ukwenza i-sheepdog ngokwakho?
Ukubheka abalimi bezimvu kuyinkinga ehlobene nenqubo yobusika emhlambini wezinkomo. Inhlangano yayo efanele inezici eziningi. Igumbi lapho zonke izimo ezidingekayo zokugcinwa kwezimvu zizokwenziwa ngokungafani ekwakhiweni kwayo kusukela egazini elijwayelekile. Kulesi sihloko sizochaza indlela yokwenza inja yezimvu - ikhaya elihle lalo hlobo lwemfuyo.